အကျိုးရှိတဲ့ စာလေးတွေ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ဘလေဂ့်လေး ကို မမေ့ပါဘူး...
ဘလော့အေးရိပ်နဲ့ နောင်တော်ကိုဧရာ အရိပ် ဘယ်ဒင်းက ပိုလဲဟမ်......အဖြေခက်ရင်လဲ ရပါ့လေဗျာ.......:P
ကျွန်မ နူတ်ခမ်းပေါ်မှာ အပြုံးစလေးခိုတွယ်သွားပြီး
မမရွှေစင်၊ စစ၊ အပြုံး ... Facebook မှ like ကြသူ အားလုံး
ကြည်စေ အေးစေ နော်.... :D
နောက်ကျတယ်လို့ မမြင်မိဘဲ သတိတရ ရေးချင်စိတ်လေးရှိနေတဲ့ အခံလေးကိုပဲ လေးစားချီးကျူးမိပါတယ်ဗျာ.
ဒီပို့စ်လေးကို Facebook ပေါ်မှာရှိတဲ့ Myanmar Blogs Digest Fan Page လေးမှာ ရှဲပေးဖို့ ယူသွားပါတယ်။
မမသီတာ..ဘလော့အကြောင်း ဖွင့်ဆိုချက်လေးက တကယ့်ကို မှတ်သားစရာပါ။
မမသီတာရော အကိုကြီး ကိုဧရာ.. သားလေး နှစ်ယောက်ရော နေကောင်းကြပါရဲ့လားး..။
မရောက်ဖြစ်လို့ အခုမှ မေးရတော့တယ်။ စိတ်တော့ဆိုးဘူးမို့လား။ (ဘယ်သူလဲ မေ့နေပြီလို့တော့ မပြောကြေးနော် :D)
ဟုတ်ပဗျာ ကိုယ့်ဘလော့နဲ့ အရာရာကို အကောင်းတိုင်းဖြစ်ခဲ့ပါကြောင်း...း)
မရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘလော့တွေကို စာရင်းလုပ်ပြီး ကျကျနနလည်နေဖြစ်ပါပြီ...နောက်များလည်း မကြာမကြာ ရောက်ဖြစ်ဖို့ သေချာပါသဗျား...
ံHappy belated Blogging Day !
လသာညရေ... ရုန်းရင်းကန်ရင်း တော်လှန်ရင်း အားလုံးနေကောင်းကြပါ၏...း)
တယောက်ကိုတယောက် အားပေးရင်း စာတွေ အတူတူဆက်ရေးကြပါစို့...
သီတာရေ... တီတင့်လဲအခြေအနေအရ ဘလော့ဒေးနေ့ကမရေးဖြစ်ခဲ့သလို ပို့စ်တွေလဲ အခုမှ လိုက်ဖတ်နေရတယ်... ဘာဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရလေးတော့ ရေးချင်ခဲ့တာ ရင်ထဲကဆန္ဒပါ။
တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေ လဲလှယ်နေတဲ့ ဘလော့ရပ်ဝန်းလေးကို ထပ်တူထပ်မျှချစ်တယ်...